Ukunyuka kuyisibhengezo esingekho mthethweni apho umdlali oshaya umchasi osemva, ngokuqhelekileyo kwinqanaba lesibini okanye ngaphantsi.
I-National Football League ichaza ukucima "njengesenzo sokuphosa umzi ngaphaya komlenze wommkeli ovumelekileyo okanye ukuhlawula okanye ukuwela emva komdlali ongezantsi kwelinqeni emva kokusondela kumva, ngaphandle kokuba umchasi umgijimi. "
Ukukhwela emilenzeni yomdlali emva kokuba ibhloko liqwalaselwe ukucinywa.
Ukunyuka kwakuqale kuvalwe kwibhola yekholeji ngowe-1916 ngenxa yobunzima bokulimala, kunye namanye amaqela alandelayo afana nesimo kwiminyaka eyalandela.
Ukunyuka kungenye yezona zixhobo eziyingozi kakhulu, kwaye ezinokuthi zenzelwe ukuhlawulwa kwebhola. Ukunyuka kunakho ukudala ulwaphulo oluninzi kumdlali otyityiweyo. Olunye ukulimala okunjalo lunokupheliswa komsebenzi, kwaye kwezinye iimeko ezinzima ziguqula ubomi, njengokuba umdlali onqatshileyo akayiqondi into engenayo kwaye ngenxa yoko akanalo ixesha lokulungiselela umzimba.
Nangona kuzo zonke ezinye iimeko akukho mthethweni, ukucima kuvunyelwe kulokho okubhekiswa kuthiwa "umdlalo wokugqibela." Umgca wokugqibela ummandla phakathi kwezikhundla eziqhelekileyo ezithatha izixhobo ezihlaselayo. Yandisa iididi ezintathu kwicala ngalinye elihlukeneyo lomgca wokubhala . Kulo mhlaba kuyasemthethweni kwiqhotyoshana ngaphezulu kwedolo.
Ukudlala ngokukhawuleza, ukuchithwa kuvunyelwe kuba abadlali kumacala omabini ebhola balwela ukuma kunye kunye, ngoko ke amandla okwenza isenzo alinganayo. Ukunyuka kuvunyelwe kumdlalo ogqithisiweyo wokubala ngoba isebenza njengendlela efanelekileyo ekunqandeni ukuvala.
Ukunyuka kungenziwa yiyiphi na indawo kwindawo: icala , ukukhusela okanye amaqela akhethekileyo.
Isiphumo sisigwebo se-yard yesi-15, kwaye u-othomathikhi wokuqala phantsi kwecala ukuba ngaba kwenziwe ngokukhusela.
Kuyafana nokucima, kodwa kuncinci kakhulu ibhloko kwisigwebo sesemva. Ibloko ekupheleni xa i-blocker idibanisa ilungu elingenalo ibhola leenkcaso emva kwaye ngokubhekiselele kunqeni. Esi senzo sibeka ingozi efanayo yokunqumla, njengoko umdlali evinjiweyo ngasemva akayiqondi into ekhoyo. Vimba ngokuphulwa komva ngokuphindaphindiweyo ngexesha leemidlalo ezikhethiweyo xa abavaliyo kwintsimi evulekile behluleka ukufumana i-angle efanelekileyo ukukhusela umdlali ozama ukujamelana nomqhubi webhola.
Ibloko ekwimva kuphumela kwisigwebo se-yard ezili-10. Ukuthintela umchasi ngaphezu kwinqanaba lezintlu emva kweso sengozini kunokuba umqhekele ngaphantsi kwelinqeni, ngoko ke isohlwayo sibi kakhulu.
Kwakhona kwintlambo efanayo njengoko ukucima i-block block. Ibloko lokuqhayisa ngumzamo ngumdlali okhuselayo ukuvimba umgangatho wezantsi lomlenze umdlali okhuselayo obesele avaliwe ngaphezu kwesibhambathiso ngomnye umdlali ohlaselayo.
Njengokucima, ibhulophu ibangelwa kwisigwebo se-yard yesi-15.
Yiyiphi i-Bike Size ye-Bike yoMntwana wam?
Indlela yokuSebenza ngeZakhono zoLwazi ngokuPhezulu - I-Primer
I-Cornice Is Architecture's Crown
Xa Abantu Bulala Abantwana Babo: Ukuqonda iMithetho yokuThathela i-Fetal Homicide